Uphahla lweTywina lwangoku
Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: » Business Directory » Abahambisi bokuPhucula iKhaya » AU » Melbourne » Uphahla lweTywina lwangoku1
Australia, Melbourne, 3170
Ipapashwe kwi-9 kwiinyanga ezidlulileyo
:: :: :: [Imeyile ikhuselwe]
Inombolo yelizwe:: 3170
Bonke abasebenzi bethu bafaneleke ngokupheleleyo kwaye banenjongo yokukholisa bonke abathengi ngomgangatho obalaseleyo, umsebenzi kunye nenkonzo yobuchule. Sikhonza amadolophu asempuma asempuma kunye nayo yonke iMetorne Metropolitan. Sibuyisele uphahla kufutshane nawe.
Uphahla lweTywina lale mihla yivenkile ethengisa indawo enye. Sinikezela uluhlu olugcweleyo lweenkonzo ezivela kulungiso lwophahla, ukubuyiselwa kwephahla, zonke iimfuno zakho zokuphahla kwaye siyakwazi nokulungiselela ukuthatha unonophelo kufakelo lwakho olutsha kunye nophahla lombala. Sikwakhathalela nokongezwa kophahla lwakho kwaye sifanisa iithayile ukutshatisa iitiles ezikhoyo ophahleni lwakho. Sikwasebenza ngokukhethekileyo ekufakweni kweefenilators ezinophahla ezinokuthi zikwazi ukumelana nemimoya engama-200km, zikunceda ugcine upholile ehlotyeni kwaye zikuncede ukukhupha konke ukufuma ebusika.
Ukuba ujonga ukulungisa uphahla lwakho singalubuyisela kwimeko yalo yasekuqaleni, uphahla lwakho lelona candelo likhulu libonakalayo kunye nempahla yendlu yakho. Ayikhuseli ikhaya lakho kuphela, kodwa inokongeza ixabiso kwipropathi yakho. Ngapha koko, idibanisa iipesenti ezingama-30 yendlu yakho engaphandle.
Sukujonga ngokuqhubekeka, ufumane isicatshulwa simahla namhlanje. Sitsalele umnxeba kule nombolo yethu yasimahla-1800 466 094.
Ibhaliswe kwi-16. Ngamana i-2019
Nxibelelana nentengiso I-041346xxxx
Ibhaliswe ngoMeyi 16, 2019